अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु गैर जिम्मेवारीपन : नेता कोइराला « News24 : Premium News Channel
अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु गैर जिम्मेवारीपन : नेता कोइराला
नेता कोइरालाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भइरहेको बेलामा विलासिताका सामान, मरिच, सुपारी, मटर दानालगायतका सामग्रीहरु आयात गर्नैपर्ने आवश्यक्ता किन छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘तालमेल मिलेन रे, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग कुरा मिलेन रे भनेर निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यति मात्रै होइन, ४० करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँछ, त्यसको छानबिन रोकिएको हुन्छ, त्यसको छानबिन गर्ने निकाय राष्ट्रबैंक हो कि होइन ? राष्ट्रबैंकले त अर्डर गर्छ नि ।’
त्यस्तै उनले विश्वका डेमोक्रेटिक देशमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा खटपट चलिरहेको हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन । किनभने राष्ट्र बैंकले जहिले पनि गलत काम अर्थमन्त्रालयले गरेको छ भने रोक्ने काम गरिरहेको हुन्छ । किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार त राष्ट्र बैंकको हो । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँले विलासिताको सामान आयात अहिले नगर्नुस्, किनभने विदेशी सञ्चिति ६ महिनाको लागि मात्रै छ भन्दा त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो । त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ ।’
उनले थपे, ‘विलासिताको सामान रोक्ने मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो ? मरिचको किन चहियो ? छोगडाको आायत किन चाहियो ? मटर दाना किन चाहियो ? त्यसको जवाफ सरकारले पनि दिनुपर्छ, अर्थमन्त्रालयले पन दिनुपर्छ । जनतालाई दिन जरुरी छ । यो कुरालाई गभर्नर, राष्ट्रबैंकले रोक्न खोज्नु गलत हो ? उहाँका कमी कमजोरीहरु होलान् तर अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला गभर्नरलाई बिना कारण निलम्वन गर्नु सरासर गैर जिम्मेवारपन हो ।’
त्यस्तै नेता कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरुमाथि पनि प्रश्न गरे । उनले सरकारले राजदूतहरुमा गरेको नियुक्ति संविधानबिरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशी नभएको दाबी आरोप लगाए । त्यस्तै उनले नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक ओम्नी काण्डमा मुछिएको व्यक्ति भएको र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले जुन नियुक्तिहरु भएको छ, राजदूतको नियुक्ति भएको छ, व्यक्तिमा म जान्न, तर संविधानको खिलाफ भएको छ कि, छैन भनेर तपाईहरुले हेर्नुपर्छ । समावेशी भयो त त्यो ? मलाई त लाग्दैन, समावेशी भयो भनेर । २० जना राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिँदैन । अहिले टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो । मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि समावेश हुनुहुन्छ । त्यस्तो विवादित व्यक्तिलाई किन गनुप¥यो ? के कारणले गर्नुभयो, यसको जवाफ सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ ।’